Umphumela Omakiwe Wokuxhumana Komphakathi Kokuhlangenwe Nakho Kwekhasimende | Martech Zone
Lapho amabhizinisi eqala ukungena emhlabeni wezokuxhumana, yayisetshenziswa njengengxenye yokuthengisa umkhiqizo wabo nokwandisa ukuthengisa. Eminyakeni embalwa edlule, noma kunjalo, imithombo yezokuxhumana iye yahlangana nomphakathi owuthandayo online - indawo yokuxhumana nemikhiqizo abayithandayo, futhi okubaluleke kakhulu, ukufuna usizo lapho benezinkinga.
Abathengi abaningi kunanini ngaphambili bafuna ukuxhumana nemikhiqizo ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana, futhi inkampani yakho ngeke ikwazi ukuncintisana uma ungangeni. Konke ukuxhumana kubalulekile, futhi ukuziba amakhasimende akuyona nje inketho - ukwenza kanjalo kuzoba umthelela omubi kokuhlangenwe nakho kwamakhasimende, bese kulimaza umugqa wakho ophansi.
Uyazi ukuthi kungani abathengi beyithanda kakhulu imithombo yezokuxhumana? Kubanika amandla okubuza imibuzo nokushiya impendulo esithangamini somphakathi lapho impendulo yakho iboniswa khona wonke umuntu azokubona - futhi ungikholwe, amanye amakhasimende abukele eduze. A funda kusuka kuConversocial ithole ukuthi abathengi abangama-88% mancane amathuba okuthi bathenge kulowo mkhiqizo onezikhalazo zamakhasimende ezingaphenduli ezinkundleni zokuxhumana. Ngokuyisisekelo, ukuthi uxhumana kanjani namakhasimende akho kuyacatshangelwa ngabathengi abangaba khona.
Abathengi namuhla bajwayele ukuthola izimpendulo ngokushesha. Lapho amakhasimende ebuza imibuzo ezinkundleni zokuxhumana, alindele ukuthi ubuyele kuwo ngokushesha ngesisombululo. Empeleni, Ama-42% wamakhasimende alindele impendulo kungakapheli ihora, ngokunye okungama-32% okulindele ukuthi leso sikhathi sibe ngaphakathi kwemizuzu engama-30. Kalula nje, kufanele iminwe yakho ishaye ngamandla ngaso sonke isikhathi ngokuqapha ama-akhawunti ezinkundla zokuxhumana ukuze ubone ukuphawula nemibuzo njengoba ingena.
Uma uthola umkhiqizo wakho phakathi kwenhlekelele yemidiya yezenhlalo, udinga ukuthola leyo nkinga okukhulunywa ngayo bese unikeza isisombululo ngokushesha. Uma wena (noma abasebenzi bakho) ningakwazi ukunikeza isisombululo ngokushesha, qinisekisa ikhasimende ukuthi uyalusebenza futhi uyalulandela lapho nje usuphendulile. Into yokugcina ofuna ukuyenza ukuphonsela inselelo ukubekezela kwamakhasimende akho ngokuwakhanyisela noma ukungawanaki ngokuphelele — lokho kungaba nemiphumela eyinhlekelele.
Ezinsukwini ezingaphambi kokuxhumana nomphakathi, abathengi bangabelana ngokuhlangenwe nakho kokuthenga okungalungile namalungu ambalwa omndeni, abangane abaseduze, nabantu osebenza nabo. Ezinkampanini, le bekuyinombolo ephathekayo ukubhekana nayo. Kodwa-ke, ngokufika kwe-Facebook ne-Twitter, abathengi abathukuthele banenani labantu elibonakala lingenamkhawulo ukuze bazitholele izinganekwane zensizakalo eyethusayo yamakhasimende nemikhiqizo e-shoddy.
Izibalo ezizungeze le nto entsha azilutho lokuthimula:
Ama-45% wabathengi abelana ngokuhlangenwe nakho okungahambi kahle kwamakhasimende ngemidiya yezenhlalo (Ucwaningo lobukhulu )
Ama-71% wabathengi abahlangabezana nokuphendula komkhiqizo okusheshayo nokusebenzayo emithonjeni yezokuxhumana kungenzeka ukuthi bancome lolo hlobo kwabanye, uma kuqhathaniswa namakhasimende ayi-19% angatholi mpendulo. (I-NM Incite)
Abantu abangama-88% bathemba izibuyekezo eziku-inthanethi ezibhalwe abanye abathengi njengoba bethemba izincomo ezivela koxhumana nabo. (I-BrightLocal)
Lapho izinkampani zibandakanya futhi ziphendula izicelo zamakhasimende ezinkundleni zokuxhumana, lawo makhasimende agcina esebenzisa imali engaphezulu ngama-20% kuya kuma-40% nenkampani. (I-Bain & Inkampani)
Ama-85% wabalandeli bemikhiqizo ku-Facebook batusa leyo mikhiqizo kwabanye (Vumelanisa)
Abathengi banamathuba angama-71% okuthenga ngokuya ngokudluliselwa kwabezindaba zenhlaloI-Hubspot)
Amakhasimende akho afinyelela kakhulu futhi anethonya elikhulu kunanini ngaphambili, futhi intshisekelo enkulu yenkampani yakho ukubagcina bejabule ngokuhlanganyela nabo ezinkundleni zokuxhumana ngokushesha okukhulu futhi kaningi ngangokunokwenzeka.
Ungasithuthukisa kakhulu isipiliyoni samakhasimende ngokuzibandakanya ekwakheni ubudlelwano kuziteshi zakho zokuxhumana. Amakhasimende akho imvamisa asekela izinqumo ngokuthenga ngokomzwelo, kunokuba logic - futhi akukho okunye okungathatha indawo yokuxhumana komuntu ekwakheni ukuxhumana okungokomzwelo.
Ungakhuthaza ukuxhumana ngokomzwelo futhi uthole onqenqemeni lomncintiswano wakho ngokuqinisekisa ukuthi amakhasimende akho ayazi ukuthi ayabonwa futhi ayaziswa.
Phendula ngokushesha emiyalezweni yabo.
Finyelela futhi ubonge abantu lapho bephawula noma babelana ngokuthunyelwe kwakho.
Thumela inothi yokubonga ezinkundleni zokuxhumana uma bethenga.
Nikeza isaphulelo ezintweni abazithandayo.
Ngokusho kweMarket Force, ukugcizelela ulwazi lwesipiliyoni samakhasimende kumazinga wokwaneliseka okuphezulu kanye nezilinganiso zezincomo eziphindwe izikhathi eziphindwe kabili kuya kwezi-2 - zombili zazo ezingaba nomthelela omkhulu ekwethembekeni kwamakhasimende nasezimalini. Uma usebenzisa imithombo yezokuxhumana ngendlela efanele, ngokungangabazeki izoba nomthelela omuhle kulwazi lwamakhasimende - futhi kwazi bani, ungahle uguqule amakhasimende ajabule abe ngabasekeli bezimpawu zomkhiqizo.
Tags: isevisi embi yamakhasimendeibayinkhanyisileokusocialisipiliyoni samakhasimendeInsizakalo yekhasimendeukwesekwa kwamakhasimendeucwaningo ntathuimizweloabasebenziindawoukuthinta komuntuindawo yokuhlanganaizimakethenm vusaisinqumo sokuthengafinyelelasocial mediaumphefumulo wemikhiqizoukwesekazendesk
Esikufundile Ngokutholwa Kwamakhasimende ngokuswayipha uthango
Iminyaka eyi-100 Kamuva: Umbuso Wobhalisile
Dec 21, 2016 ku-9: 55 AM
Enye yezinzuzo ezinkulu zemithombo yezokuxhumana yebhizinisi ukuyisebenzisa ukukhulisa ithrafikhi yewebhusayithi yakho. Imithombo yezokuxhumana ayigcini ngokusiza ukuthi uqondise abantu kuwebhusayithi yakho, kepha ngokwengeziwe lapho uthola khona imidiya yezokuxhumana, isikhundla sakho sosesho sizoba sikhulu.
Dec 21, 2016 ngo-1: 22 PM
Ngokungaqondile, lokho kuyiqiniso… kepha iGoogle isishilo ngaphambili ukuthi ayisebenzisi ukwabelana komphakathi ngqo ukunquma isikhundla. Ngokungaqondile, ukwabelana ngokuqukethwe kwakho emphakathini ngokuvamile kwenza abanye abantu babelane futhi bakhulume ngakho. Lapho lezo zixhumanisi ezifanele zithola indlela yazo eya kumasayithi afanele, khona-ke kuyasiza ukukala.